Malawi: Maxkammad sii daysay Ganacsade Nebi sheegtay | Berberanews.com
Home WARARKA Malawi: Maxkammad sii daysay Ganacsade Nebi sheegtay
Malawi: Maxkammad sii daysay Ganacsade Nebi sheegtay
Malawi-(Berberanews)-Qaadiga maxkamada Malawi ayaa xabsiga ka sii daayay nin ganacsade ah oo sheegta nabi Shepherd Bushiri iyo xaaskiisa Mary iyagoo sheegay in xadhiga lamaanahan oo wajahaya eedeymo la xidhiidha lacago, xatooyo iyo khiyaanooyin ka dhacay Koonfur Afrika uu ahaa mid sharci daro ah.
Tallaabadan ayaa timid Khamiistii maaddaama uu Maamulaha Magaalada Viva Nyimba uu sheegay in xadhiga lamaanaha ee Malawi maalintii hore uu ka hor imaanayo sharciyada dalka wuxuuna amar ku bixiyay in la siidaayo damaanad la’aan damiin “iyadoo loo eegayo cadaaladda.
Booliska Malawi ayaa xidhay Bushiri ka dib markii uu ka baqay damaanada Koonfur Afrika oo uu ka baxsaday dalkiisa.
Bushiri ayaa sheegay in noloshiisa ay khatar ku jirto Koonfur Afrika oo uu aaminsan yahay inaanu heli doonin maxkamad cadaalad ah.
Isaga iyo xaaskiisa waxay sugayeen maxkamad iyadoo lagu soo oogay dacwado la xidhiidha lacago la dhaqay, xatooyo iyo wax isdabamarin ka dhacday Koonfur Afrika, laakiin waxaa soo ifbaxay dhamaadkii todobaadkan in si qarsoodi ah looga dhoofiyay dalka lana geeyay caasimada Malawi ee Lilongwe, sida ay sheegtay BBC.
Taasi waxay kalliftay maxkamad Koonfur Afrika inay soo saarto laba waaran oo lagu xiray Bushiri.
Waxaa jiray khilaaf diblumaasiyadeed oo cakiran oo udhaxeeya Malawi iyo Koonfur Afrika kaasoo ku saabsanaa cidda lagu eedeeyey baxsashadiisa
maxkamada oo sii daysay
nin nebi sheegtay
Previous articleDaawo Barnaamij lagu Lafa-garay Saamaynta Dhaqaale & Siyaasadeed ee Ka Dhalan Kara Joojinta Gaadiidka Gurran & Vitz-ta!
Next articleDr Edna Aadan maxay ka tidhi shakhsiyaddii Marxuum Cumar Carte?
Jabhadda TPLF oo mar kale duqaysay Eritrea
Saynisyahan ku takhasusay Nuclearka oo lagu dilay gudaha Iran
Abbiy oo mar kale meesha ka saaray wadahadal lala galo Tigree
Wararkii u danbeeyay ee khasaaraha Qarax Muqdisho ka dhacay
Madaxdhaqameedka Awal Bari oo cabasho ka muujiyay Komishanka Doorashooyinka
Turkiga oo xukumay 337 qof oo ku lug lahaa Afgemi dhicisoobay
Abbiy Axmed oo ka hadlay Duullaankii u dambeeyay ee ay qaadayaan
Maxkamadda Hargeysa oo xukuntay rag ku eedaysna ganacsiga Harimacadka
Somaliland oo qisaas ku fulisay lix nin
Sarkaal CIA ka tirsanaa oo lagu dilay Somalia.
Somaliland: Oddoroska miisaaniyad-sanadeedka 2021
Dagaalka ka dhacay garoon diyaaradeed Magaalada Axum
Somaliland: Ganacsato iyo siyaasiyiin Kufsi geysta oo dhaqaale kaga baxsada sharciga